Gịnị bụ ide ike mbanye?
Ide ike mbanye bụ ihe kasị omenala ụdị ike draịva na e ji n'oge gara aga ma ndị ka na-eji na a nnọọ nnukwu ọnụ ọgụgụ. Ha na-maara na-omenala dị ka technology n'elu nke ha na-adabere dịtụ ochie na ndị nkwado bụ ike ịchọta. Ide anọchi Integrated Drive Electronics ma ọ bụ IBM Disc Electronics nke na-eji dị ka ọkọlọtọ interface niile IBM dabeere draịva, CD na DVD draịva. Na ide n'adịghị Obere Computer System Interface na controllers na-emi odude o ọ bụla mbanye nke pụtara na onye ọ bụla mbanye na ya nwere ike ikwurịta okwu na motherboard. The e mesịrị version nke ide na-abbreviated dị ka EIDE ma ọ bụ Enwekwukwa ide nke na-arụ ọrụ dị ka ọkọlọtọ interface maka IBM dabeere ike draịva na kọmputa nke yiri genre. Na azụ nke a mbanye emi odude na ide interface USB, jumpers na ike njikọ. Ide na-mgbe ụfọdụ a makwaara dị ka PATA ie Parallel Advanced Technology mgbakwunye na nwere ọtụtụ uru n'elu ndị ọhụrụ SATA technology nke nke otu nke kasị mma bụ na ide ike draịva nye kacha ndakọrịta ma n'aka nke ọzọ nnukwu nchekwa na-mgbe na-akwado site na nke a technology.
What`s ihe dị iche n'etiti ide ike, na-SATA ike mbanye?
Mgbe ọ na-abịa differentiating abụọ teknụzụ ndị mbụ na ndị mbụ n'ókè nke na-abịakwute n'uche bụ mwepụta nke teknụzụ ndị a ebe ide bụ ihe nke metụtara okenye na nsụgharị nke IBM dabeere ike draịva na SATA bụ dịtụ ọhụrụ technology. SATA-mara dị ka Serial ATA ma ọ bụ Serial Advanced Technology mgbakwunye. Ebe ide-enye kacha ndakọrịta na SATA ike draịva nye ọrụ na nnukwu nchekwa na ndị dịtụ ego. New nkà na ụzụ nkwado dị ka nwa afọ iwu queuing na-ekpo ọkụ ịkwụnye bụ ihe nke ide enwereghị edi ke SATA draịva ndị na-erughị ruru eru maka sava na-akwado ndị na-ekpo ọkụ ike mbanye ịkwụnye dị ka mma. Nnyefe data na ide bụ kwa ngwa ngwa ka tụnyere SATA ie 133 MB / s na SATA data transfer udu gbagoo 600 MB / s. The data USB nke ide bụkwa omenala na nwere ike ruo 18 sentimita asatọ n n'ogologo, SATA data USB bụ Olee ihe enyemaka 3ft n'ogologo na ike na data ọwa na-spitted abụọ njikọ. Iji ide onye ọrụ nwere ike nwere ihe karịrị otu ike draịva ejikọrọ na ime nke a na data cables jikọọ site na otu ọzọ. Ọ confuses kọmputa usoro nakwa na maka otu ihe ahụ ọ bụ enweghị ike mara na nke ụgbọala bụ onye site na nke OS bụ na-kwajuru na ọ bụ ihe niile ruru jumpers. Na SATA ọ bụla mbanye bụ na-ekwurịta okwu na motherboard kpọmkwem na isi mbanye nwere ike mfe setịpụrụ si BIOS ntọala nke usoro.
Olee otú naghachi data si ide ike mbanye?
E nwere ọtụtụ iri puku software mmemme na-dị na ahịa na-eme ka n'aka na ọrụ ndị na-enwe afọ ojuju mgbe ọ na-abịa ide ike mbanye data mgbake Otú ọ dị elekọta kwesịrị na-eme wile ịzụta onye dị ka ha nile na-abụghị otu na mgbe na-enye otu ọrụ ma ọ bụ ndakọrịta na ide ike draịva. Iji mee ka usoro mfe n'ihi na onye ọrụ na software omume na-eji maka mgbake kwesịrị nwere ọrụ enyi na enyi interface na kwesịrị agbake data enweghị ịnọgide na-ele otú ndị agadi ihe bụ nsogbu bụ.
Ọ bụ maa a ijuanya na e kere site Wondershare. Mgbe ọ na-abịa data mgbake onye ọrụ ahụmahụ bụghị nanị egwu ma ndị ọrụ na-nnọọ ukwuu afọ ojuju na nke a dị ka data na-mgbe natara dị ka kwa ha uche na ọchịchọ. E nwere ihe abụọ ụdịdị nke data mgbake mgbe ọ na-abịa a usoro ie data mgbake na ọkachamara mode na data mgbake na ọkọlọtọ mode. Ọ bụrụ na onye ọrụ bụ amụ ọrụ mgbe ahụ ọ na-gwara na-aga na ọkachamara mode dị ka naanị ịpị a chọrọ ịrụ ọrụ ahụ. The elu Mmanu nwere ike ịga na ọkọlọtọ mode dị ka ọ ga-adị mfe n'ihi na ha na-eso.
Ozugbo omume ebudatara na ulo oru ya ga-akpaghị aka na-ọrụ na-ọkachamara mode nke a ga-kọwara ebe a dị ka ọ bụ dị mfe na ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị tech savvy na niile:
Ozugbo ọzọ button a pịrị onye ọrụ ga-eduzi ndị ọzọ ihuenyo ebe ọ ga-aza mbụ nke ajụjụ abụọ ntụgharị ihe faịlụ ụdị nke a onye ọrụ chọrọ naghachi ke akpa itie:
Onye ọrụ ga-ahụ ga jụrụ ịhọrọ ebe ebe ọ na-eche faịlụ nwere ike a furu efu nke dị adị tupu ọ ehichapụ:
Mgbake mode na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na faịlụ-achọ amalite. Ọ bụ uru na kwusịrị na ndị miri Doppler na-ewe ogologo oge nke oge ebe dị ka ya-enyocha kwa ihe ọjọọ niile ndi nke ike mbanye dị ka mma. N'aka nke ọzọ na raw faịlụ mgbake ga-eduga onye ọrụ na-ọkọlọtọ mode nke bụ maka elu ndị ọzọ ọrụ:
Ozugbo usoro nke miri emi Doppler agwụ onye ọrụ ga-enwe ike ịhụ ihe niile faịlụ na e natara site omume na onye ọrụ nwere ike ịlele faịlụ ka-eweghachi na see naghachi bọtịnụ mezue usoro:
> Resource> Draịvụ> The ụzọ kasị mma iji weghachi data site na ide Draịvụ